Nakhu okumele ukwazi ngombiko kolwemfundo yamahhala – LIVE Express
Staff Reporter | 13 November 2017 | Business, News |
NgoMsombuluko uMengameli Jacob Zuma ugcine ewumemezele umbiko obesekunesikhathi ulindelwe ngambomvu we-Heher commission nebiphenya ngokuthi ingakhoneka yini imfundo yamahhala kuleli noma cha.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMengameli Zuma wasungula iCommission of Inquiry into Higher Education and Training ngomhlaka-14 January 2016 kulandela imibhikisho eyayidla lubi kuleli yabafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme ababelwela imfundo yamahhla ngaphansi komkhankaso we-#FeesMustFall. USihlalo wale khomishina bekungu-Justice Jonathan Arthur Heher, nobesizwa ngu-Adv Gregory Ally kanye no-Ms Leah Khumalo.
UKUKHOKHELWA KWEMFUNDO EPHAKEME: Ikhomishana income ukuthi uhulumeni anyuse imali ayisebenzisa ekhokhela imfundo ephakeme okungenani ngo-1% we-GDP nokuhambisana nesimo somnotho. Kuphinde kwanconywa nokuthi uhulumeni abhekisise ama-Technical and Vocational Education and Training colleges njengoba engeke asebenza ngokwezinga lamanje lokuxhaswa kwawo ngemali.
IZINDAWO ZOKUHLALA ABAFUNDI: Ikhomishana income ukuthi kwakhiwe ezinye izindawo zabafundi bese kubekwa eqhulwini izikhungo zemfundo ezazincisheke amathuba ngaphambilini Iphinde yancoma nokuthi kube khona ukusebenzisana phakathi kukahulumeni kanye nemboni ezimele ukubhekana nezinselelo zokuswelakala kwezindawo zokuhlala abafundi.
UKUFUNDA ONLINE KANYE NOFUNDA OKUYINHLANGANISELA: Ikhomishana income ukuthi uhulumeni uqhubeke nokuphenyisisa ukuthi ingakhoneka yini i-“online and blended learning” njengesisombululo sezindleko zokufunda kanye nomthamo omumathwa yizikhungo zemfundo ephakeme.
FUNDA NALOLU DABA: UZuma uthi ‘uzokwenza isimemezelo maduze’ kolwemfundo yamahhala
UKUKHOKHELWA KWABAFUNDI ABAFUNDA EMA-TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET): Ikhomishana income ukuthi bonke abafundi abafunda ema-TVET Colleges kumele baxhaswe ngokuphelele ukefundeni mahhala nokuzokhokhela zonke izindleko futhi kungabi khona umfundi ozothola uxhaso oluyingxenye noma olungagcwele.
AMA-POSTGRADUATE STUDENTS: Kunconywe ukuba ama-NRF bursaries anikwa ama-postgraduate students agcinwe futhi anetshwe uma kungenzeka. Kuphinde kwanconywa nokuthi ama-Postgraduate students athole ama-Income-Contingency Loans (ICL) avela emabhange azimele nazoqinisekiswa nguhulumeni.
IZIKWELETI ZANGAPHAMBILINI: Kunconywe ukuthi abafundi abanezikweleti, asebephothule izifundo (graduated), nabo banikezwe ama-income-contingent loans (ICL).
NSFAS: Ikhomishana income ukuthi ukubamba iqhaza kwe-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ekukhokheleni imfundo yasemanyuvesi kuvalwe isikhala sakho ngohlelo lwe-ICL. U-NSFAS kumele ugcinwe ekukhokheleni izindleko zokufunda kubo bonke abafundi abafunda ema-TVET.
UKUKHOKHELWA KWEMFUNDO YASEMA-UNIVERSITY: Kunconywe ukuba bonke abafundi abangama-undergraduate kanye nama-postgraduate abafunda emakolishi nasemanyuvesi omphakathi kanye nazimele, kungakhathalekile ukuthi imuva labo linjani, bakhokhelwe ngohlelo lwe-Income-Contingency Loans azothathwa emabhange azimele bese eqinisekiswa uhulumeni.
REGISTRATION FEES: Ikhomishana incoma ukuthi iqedwe nya indaba yama-application kanye nama-registration fees.